ကျမ္မာရေးဆိုင်ရာ Archives - TheeSayChin
သင့်ချစ်သူဟာ စိတ်ရင်းအရမ်းကောင်းပေမယ့် နားလည်ရခက်တဲ့သူမှန်း သိနိုင်မယ့် လက္ခဏာများ
ရက်(၁၀၀) ပြည့်မှာ အသည်းယားစရာချစ်ဖို့ကောင်းနေတဲ့ နန်းမြတ်ဖြိုးသင်းရဲ့သားလေး Jack Jack
သင်ဟာမွေးရာပါ ထူးခြားတဲ့စွမ်းအင်တွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူမှန်း သိနိုင်မယ့် လက္ခဏာ (၇) မျိုး
စစ်မှုထမ်းဆောင်နေတဲ့ Park Hyung Sik ဆီကို BTS အဖွဲ့ဝင် V နဲ့အတူ သွားလည်မယ်ဆိုတဲ့ Park Seo Jun
အကြောသေတဲ့အထိ ဖြစ်သွားစေနိုင်တာကြောင့် လုံးဝမပေါ့ဆသင့်တဲ့ သွေးခဲခြင်းလက္ခဏာ(၆)မျိုး…
July 24, 2019 Min Yar Zar	0 Comments ကျမ္မာရေးဆိုင်ရာ
အကြောသေတဲ့အထိ ဖြစ်သွားစေနိုင်တာကြောင့် လုံးဝမပေါ့ဆသင့်တဲ့ သွေးခဲခြင်းလက္ခဏာ(၆)မျိုး… ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့ အခါတိုင်းမှာ ခန္ဓာကိုယ်ထဲက သွေးတွေအများကြီး မထွက်သွားအောင် သွေးခဲခြင်းဖြစ်စဉ်က အလိုလိုအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ သွေးခဲခြင်းဖြစ်စဉ်သာမရှိရင် လူတွေသေကုန်ကြတာကြာပါပြီ။ ဒါပေမယ့် ခန္ဓာကိုယ်အပြင်ဘက်မှာ သွေးခဲဖို့ မဖြစ်မနေ လိုအပ်တယ်ဆိုပေမယ့် ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ ရှိနေတဲ့အချိန်မှာ
သင်မသိသေးတဲ့ ငှက်ပျောခွံနဲ့ အလှအပဆိုင်ရာ နည်းလမ်းကောင်းများ…
July 21, 2019 Min Yar Zar	0 Comments ကျမ္မာရေးဆိုင်ရာ
သင်မသိသေးတဲ့ ငှက်ပျောခွံနဲ့ အလှအပဆိုင်ရာ နည်းလမ်းကောင်းများ… ငှက်ပျောသီးစားပြီး ငှက်ပျောခွံကို လွှင့်မပစ်လိုက်ပါနဲ့နော်။ ငှက်ပျောခွံက သင့်အလှအပအတွက် များစွာအသုံးဝင်ပါတယ်။ ငှက်ပျောခွံနဲ့ပတ်သက်ပြီး သင်မသိသေးတဲ့ အလှအပဆိုင်ရာ နည်းလမ်းကောင်းတွေကို မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။ (1) သွားများဖြူဝင်းစေဖို့ ငှက်ပျောခွံဟာ သွားတွေကို ဖြူဖွေးစေတယ်ဆိုတာ
တစ်လအတွင်း သင့်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကို ပြောင်းလဲပစ်နိုင်မယ့် ရိုးရှင်းလွယ်ကူတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်း..
July 18, 2019 Min Yar Zar	0 Comments ကျမ္မာရေးဆိုင်ရာ
တစ်လအတွင်း သင့်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကို ပြောင်းလဲပစ်နိုင်မယ့် ရိုးရှင်းလွယ်ကူတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်း.. ပျိုမေအားလုံးရဲ့ အိပ်မက်က မှန်ကြည့်လိုက်တိုင်း အဆီကင်းစင်ပြီး လှပကျန်းမာတဲ့ မိမိခန္ဓာကိုယ်ကို မြင်နိုင်ဖို့ပါ။ ခန္ဓာကိုယ်အဆီကျဖို့အတွက် ဝိတ်ချကိရိယာတွေ လိုအပ်တယ်လို့ သင်သိထားမှာပါ။ ဒါပေမဲ့ အားကစားခန်းမသွားတာ၊ ဝိတ်တုံးမတာတွေထက် ရိုးရှင်းလွယ်ကူတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းရှိပါတယ်။
“အမျိုးသမီးတိုင်း သိထားသင့်တဲ့ မအင်္ဂါ နာကျင်ရခြင်း အကြောင်းအရင်းများ”
July 16, 2019 Min Yar Zar	0 Comments ကျမ္မာရေးဆိုင်ရာ
“အမျိုးသမီးတိုင်း သိထားသင့်တဲ့ မအင်္ဂါ နာကျင်ရခြင်း အကြောင်းအရင်းများ” ပရိသတ်ကြီးအတွက် ဗဟုသုတစာပေများကို မျှဝေပေးလျက်ရှိရာ အခုတခါ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ သတိပြုစရာအဖြစ် အမျိုးသမီးလိင်အင်္ဂါနာကျင်ရခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖော်ပြပေးလိုက် ရပါတယ် ။ အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ ပုံမှန်အားဖြင့် ဓမ္မတာလာစဉ်ပျမ်းမျှ၅ရက်အတောအတွင်းမှာပဲမအင်္ဂါကနာကျင်လေ့ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တခါတလေ တစ်စုံတစ်ရာထိခိုက်မိခြင်းမရှိပေမယ့်
ပဲနို့ဗူး ၀ယ်သောက်တတ်တဲ့ ကလေးတွေ ဆင်ခြင်ဖို့ပါ ..
July 15, 2019 Min Yar Zar	0 Comments ကျမ္မာရေးဆိုင်ရာ
ပဲနို့ဗူး ၀ယ်သောက်တတ်တဲ့ ကလေးတွေ ဆင်ခြင်ဖို့ပါ .. “ဘုရား ဘုရား ကြောက်စရာကောင်းလိုက်တာ သူနာပြု ဆရာမလေးတယောက်တင်ပြထားတာကို ဖတ်ပြီး အားလုံး ဆင်ခြင်ကြပါစေရန် …. တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော် …. ။ ထိုင်းနိုင်ငံထုတ် ပဲနို့ဗူးတွေပါ
ရေနွေးထဲ ဂျင်းထည့်ပြီး အိပ်ခါနီးတိုင်းသောက်ပေးရင် ရရှိလာမယ့် အံ့မခန်းအကျိုးကျေးဇူးများ
July 14, 2019 Min Yar Zar	0 Comments ကျမ္မာရေးဆိုင်ရာ
ရေနွေးထဲ ဂျင်းထည့်ပြီး အိပ်ခါနီးတိုင်းသောက်ပေးရင် ရရှိလာမယ့် အံ့မခန်းအကျိုးကျေးဇူးများ ဂျင်းမှာ သတ္တုဓာတ်ကြွယ်ဝစွာပါဝင်ပါတယ်။ ပိုတက်ဆီမယ်၊ မဂ္ဂနီဆီယမ်၊ ကော့ပါးသတ္တုတွေပါဝင်တာကြောင့် နေ့စဉ်မရှိမဖြစ် လိုအပ်တဲ့ဓာတ်စာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ညအိပ်ရာဝင်ခါနီးတိုင်း ရေနွေးထဲ ဂျင်းထည့်ပြီးသောက်ပေးလိုက်ရင် ရရှိလာမယ့် အံ့မခန်း အကျိုးကျေးဇူးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော် …
ချောင်းဆိုး၊ ရင်ကြပ်၊ သလိပ်ကပ်သူများ ချက်ချင်းပျောက်စေနိုင်မည့် ဆေးနည်း…
July 12, 2019 Min Yar Zar	0 Comments ကျမ္မာရေးဆိုင်ရာ
ချောင်းဆိုး၊ ရင်ကြပ်၊ သလိပ်ကပ်သူများ ချက်ချင်းပျောက်စေနိုင်မည့် ဆေးနည်း… ချောင်းဆိုး၊ ရင်ကြပ်၊ သလိပ်ကပ်သူများ ချက်ချင်းသောက် ချက်ချင်းပျောက်စေနိုင်မည့် ဆေးနည်းပဲဖြစ်ပါတယ် … ။တကယ် လက်တွေ့ ပျောက်ကင်းပါတယ်ခင်ဗျာ … ။ ချောင်းဆိုး၊ ရင်ကြပ်၊ သလိပ်ကပ်၊
ညဘက်ကောင်းကောင်း အိပ်မပျော်သူများအတွက် ပညာရှင်တွေရဲ့ အကြံပြုချက် (၈)ချက်
July 11, 2019 Min Yar Zar	0 Comments ကျမ္မာရေးဆိုင်ရာ
ညဘက်ကောင်းကောင်း အိပ်မပျော်သူများအတွက် ပညာရှင်တွေရဲ့ အကြံပြုချက် (၈)ချက် ဒီနေ့ခေတ်ထဲမှာ အိပ်မပျော်တဲ့ရောဂါခံစားနေရတဲ့သူတွေ များသထက်များလာပြီး အိပ်ရေးမဝခြင်း၊ အိပ်စက်ပုံမမှန်ကန်ခြင်းတို့ကြောင့် ကျန်းမာရေးထိခိုက်တာတွေလည်း များလာပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပညာရှင်တွေက ညဘက်ကောင်းကောင်းအိပ်ပျော်စေမယ့်နည်းတွေနဲ့ ကျန်းမာရေးကိုအထောက်အကူပြုမယ့်အိပ်စက်နည်းတွေကို အခုလို မျှဝေခဲ့ပါတယ် နော် …
မိန်းမကောင်းတို့တွင်သာ တွေ့ရသော လက္ခဏာ (၈) မျိုး
မိန်းမကောင်းတို့တွင်သာ တွေ့ရသော လက္ခဏာ (၈) မျိုး (၁) ထမင်းစားသောအခါ မိခင်ကဲ့သို့ လုပ်ကျွေးသောမိန်းမ (၂) လင်သားကို အဝတ်စားပြုပြင်ပေးတတ်သောမိန်းမ (၃) ဘေးအန္တရာယ်ကြုံသောအခါ တိုင်ပင်၍ ရသောမိန်းမ (၄) ”ကျွန်” မကဲ့သို့ လုပ်ကျွေးတက်သောမိန်းမ
တစ်နေ့ ကြက်ဥ နှစ်လုံးစားပါက ရရှိလာစေမည့် အံ့မခန်း အကျိုးကျေးဇူးများ
တစ်နေ့ ကြက်ဥ နှစ်လုံးစားပါက ရရှိလာစေမည့် အံ့မခန်း အကျိုးကျေးဇူးများ လူအချို့ယုံကြည်ထားတာက သင်ဟာ ကြက်ဥနေ့တိုင်းစားရင် ကိုယ်တွင်းကိုလက်စထရောတက်စေတယ်ဆိုပြီးတော့ပါ။ သင်က ဝိတ်ချနေတဲ့သူဆိုရင် အာဟာရပညာရှင်တွေက ကြက်ဥကိုမစားခိုင်းပါဘူး …။ ဒါပေမဲ့ လေ့လာမှုများစွာကတော့ မနက်ပိုင်းမှာကြက်ဥစားပေးတာက အကောင်းဆုံးပဲလို့ ဆိုထားပါတယ်။ဒါကြောင့်
Zawgyi Font ဖြင့်ဖတ်ရန် Instagram/elonmusknews Tesla (TSLA) နဲ့ SpaceX နည်းပညာကုမ္ပဏီတွေကို တည်ထောင်သူ စီအီးအိုဖြစ်တဲ့ အီလွန်မတ်စ်ခ်ဟာ Bluetooth နည်းပညာနဲ့ အသုံးပြုနိုင်တဲ့ ချစ်ပ်ပြားတွေကို လူ့ဦးနှောက်ထဲ ထည့်သွင်းနိုင်ဖို့ ကြိုးပမ်းနေကြောင်း CNN